China European quality zuru akpaka ọgwụ n95 mpịachi masks mmepụta igwe na ndị na-emepụta | HRF
Kedu ihe kpatara Họrọ HRF
Akpaaka na-abụghị igwe mkpuchi akpati igwe
1+ 2 Igwe ihe nkpuchi ụgbọ elu zuru ezu
1 + 1 igwe eji eme ihe nkpuchi ụgbọ elu zuru ezu
Ibepu igwe ihe eji eme ihe nke puru iche na ebe nchekwa gi
Ultrasonic generator Earloop ịgbado ọkụ igwe
Igwe eji ihe nkpuchi akpukpo okpukpo
Semi-akpaka ụgbọelu nkpuchi ahu igwe
Semi-akpaka KN95 ihe nkpuchi mmepụta ahịrị
Igwe nkpuchi mkpuchi KN95
Igwe ihe nkpuchi kF94
Mbukota ihe mkpuchi, igbe ihe, ndochi ya na ihe eji etinye ya
Igwe igwe sterịn UV maka masks
Meltblown na-eme akwa akwa
Spunbond akwa ịkpụkọ igwe (A na-abụghị kpara akwa igwe)
SMS akwa mmepụta akara
Baby Diaper akara
Ngwunye igwe nwere ike iwepu
Akpụkpọ ụkwụ mkpuchi akpụkpọ ụkwụ
Ngosiputa ihe eji egwu ogwu nsem nke Europe nke dikwa n95
Igwe a bụ igwe-in-otu nke igwe nwere ime okpukpu atọ nke akpaaka. Site na inye akwa akwa ruo na mmechi nke ngwaahịa akpachara, nke gụnyere (eriri akwa, mbipụta), ịgbado ọkụ na-agbanwe agbanwe, mpịachi, akpụ, ịgbado ọkụ na mkpụcha ngwaahịa, mkpofu ahihia, na nsonaazụ ngwaahịa, akpaka. emeputa igwe n’agha nke oma. (igwe dum chọrọ otu onye ka ọ rụọ ọrụ).
Odi mba di aso 1C
≤3000kg, ike ibu ala ≤500kg / m2
akụrụngwa 220VAC ± 5% ； 50HZ ； nyere ikike 17KW
Mgbagide ikuku ikuku 0,5-0.8MPa; Mgbanye ikuku nke abịakọrọ 300L / min (ikuku mmiri na-agbanwe siri ike; mmanụ na mmiri kwesiri ịdị
1800-2500PCS / H （dabere na awa 20 kwa ụbọchị, kwa ụbọchị
ike dị ihe dị ka 36,000-50,000 iberibe）
Asambodo ruru eru
99% (ewepu ihe ndị na-abata ezughị ezu, adịghị mma
ime ihe site n'aka ndị ọrụ)
Kwadebe ọdịda odida
≤2% （ngwá ọrụ ọdịda onwe ya）
Gburugburu ebe ọrụ
Okpomọkụ 10 10 35 ℃; iru mmiri: 5-35% HR
Ọkụ na-ere ere, ikuku na-ere ere, ọ nweghị ájá (ịdị ọcha na-erughị ọkwa 100,000)
1. factorylọ ọrụ anyị kpuchitere mita 35,000;
2. ISO, CE, FDA onye nrụpụtara asambodo;
3. Karịrị 15 mmepụta ahịrị dị elu;
4. Họrọ ndị na-eweta ngwá ọrụ ama ama ama ama n'ụwa niile;
5. Ahụmịhe bara ụba maka mbupụ mba 40.
6. Ndi otu ndi okacha amara juputara n’inwe obi uto na oru ndi n’echebara eke uru diri ndi ahia anyi dika ihe mbu, anyi tukwasiri obi na anyi n’eto gi site na imekorita ogologo oge.
Nweta ruturu ugbua !!!
MAKA MAKA & IPM .AKA
1.Does otu igwe nwere ike imepụta otu nha?
Ọ bụghị nke ọma, ọ dabere na igwe.
2. you nwere nkwado azụmaahịa?
Ee, anyị nwere obi ụtọ ịnye ndụmọdụ ma nweekwa ndị ọrụ ụlọ ọrụ nwere aka ịchekwa igwe ma ọ bụrụ na achọrọ.
3. Otu esi eleta ụlọ ọrụ gị?
Anyị nwere ike isi n’ọdụ ụgbọ elu Shanghai ma ọ bụ Hangzhou kpọpụta gị. Ma ọ bụ ụgbọ okporo ígwè Shaoxing North.
4. Kedu ihe ị ga - eme ma ọ bụrụ na igwe igwejiri agbaji?
Oge akwụkwọ ikike nke igwe anyị bụ 12months. ọ bụrụ na akụkụ ndị mebiri emebi enweghị ike ịrụzi, anyị nwere ike izipu akụkụ ọhụrụ ka ọ dochie akụkụ ahụ mebiri emebi, mana ịkwesịrị iji aka gị kwụọ ụgwọ ihe ngosi ahụ. ọ bụrụ na mgbe oge akwụkwọ ikike ahụ, anyị nwere ike site na mkparịta ụka maka idozi nsogbu ndị a, anyị na-enyekwa nkwado teknụzụ maka ndụ niile akụrụngwa.
5.Pinye gị ọfụma maka ibu njem?
Ee, biko gwa anyị ọdụ ụgbọ mmiri ma ọ bụ adreesị ebe anyị na-aga. anyị nwere ahụmịhe bara ụba na ụgbọ njem. 6. 6.I bu ulo oru ahia ma obu ulo oru?
7. Gini mere ọnụahịa gị ji dị elu karịa ndị ọzọ?
Ka anyị na-ekwusi ike na ụlọ ọrụ ọ bụla kwesịrị itinye ogo n'ọnọdụ mbụ. Anyị na-etinye oge na ego iji zụlite otu esi eme igwe ọfụma karịa nke mbụ, nke ziri ezi na nke dị elu. Anyị nwere ike ijide n’aka na igwe anyị nwere ike iji ihe karịrị afọ iri abụọ n’enweghị nsogbu ọ bụla.
8. you nwere injinia esenidụt?
Ee, anyị abụghị naanị inye ndị injinia mba ofesi kama anyị na-enyekwa ọzụzụ ọzụzụ.
9.Onye ị nyeziri ahazi?
N’ezie, anyị nwere ike ịhazi akụrụngwa dịka data nke ngalaba nhazi ị nyere. Anyị bụ ọkachamara mpempe akwụkwọ mpempe igwe na-akpụ akpụ igwe na onye nrụpụta.
Nke gara aga: N95 zuru oke na-ekpuchi ihu na-eme akara igwe
Osote: Igwe eji emechi ihe eji emechi anya ihe eji eme ihe eji etinye ihe eji eme ihe
N95 zuru oke ihu masks na-eme igwe p ...